China Nico fekitari uye vagadziri | Inshare
Product zita: Nico
Description: Disposable vape mudanga
Battery kugona: Built-muna 280 naRaama lithum bhatiri
Puff: About 300 inotutumadzisa (Maererano nomumwe mashandisirwo)
Charging nzira: Disposable, kukanda pashure kushandisa
Vape chinyoreso uremu: 15.4 d
Tank: 1.3 Rine mamiririta nokuti CBD & e-muto
Heating coils nemishonga: 1.8Ω
Surface Process: Sticker / Oxidation / Baking pendi / Inogona customized
MOQ: 100 yakatarwa, OEM / ODM murayiro vanoda 1000 nemhando
New Disposable chinhu Hardware vape mudanga kuti CBD kana e-muto
Nechitarisiko: Uyu munhu mutsva mhando sandara kuraswa vape mudanga, aruminiyamu chiwanikwa zvinhu, pamusoro chinamirwa Chaizvoizvo, zvitaera akasiyana mapepa nedzimwe zvekunyanyisa.
Nhongai uye muchayamwa, nyore ishande.
CBD & E-muto pod: The tangi kugona 1.2ml, vanenge 280 inotutumadzisa. Zviri kuraswa pod kuti haagoni kutsiviwa.
Battery: yavakwa-muna 280mAh bhatiri, kuraswa kushandisa, hapana chikonzero kubhadharisa, urirasire pashure kushandisa.
Product zita & Model
hapana chinovhara ratidza
Chose kuraswa, kukanda pashure kushandisa
Customized akapfuma muchero siyana pamwe ikapenya mavara kavha
1.2 Rine mamiririta nokuti CBD & e-muto
(Height) 94.0 * (Width) 15.5 * (ukobvu) 6.5mm
Akavaka-muna Or External Battery
Battery capacity (naRaama)
280 (yavakwa-mu bhatiri vanokwanisa 280mAH)
Air zvekufambisa, taura, etc.
Sei Sarudza inshare?
1. Itai R wakakwana & D chikwata: MD mainjiniya, zvemagetsi mainjiniya, ID mainjiniya, inoratidza pachena vagadziri, unogona kusangana OEM / ODM customization kuti vatengi siyana.
2. Research uye kukura results: vanopfuura 100 ukama patents ose e-midzanga, kusanganisira 10 kuvamba patents.
3. Tava vakabatana uye akakurukura e-mudzanga indasitiri neshamwari panguva dzokudya uye kunze, uye vanoziva hwokugadzira indasitiri mitemo munyika dzakasiyana-siyana munyika. Tinogona vagoronga zvigadzirwa kuti vatengi vanoda maererano pfungwa dzataurwa nokuda mutengi. Kubva yapfuura chigadzirwa mashoko mukutsinhana, kuti pakati muforoma kukura design, zvapedzisira mharidzo bvunzo, pane mashoko zvakakwana kuongorora, nechokwadi kuti chigadzirwa kugadzirwa asangana ichangoburwa uye vakawanda nokuveza-kumucheto anokonzerwa kumusika.
4. Laboratory midziyo configuration vacuum kunaka kumanikidzwa muchina, mukuru uye vakaderera tembiricha bvunzo muchina, bhatiri tigutsikane meter, utsi bvunzo muchina, Salt pfapfaidzo bvunzo muchina, vibration tester.
1. Managers vane avhareji yemakore anopfuura 10 ruzivo.
2. Assembly site: kugadzirwa nzvimbo 54,000 mativi Ft 2, 10 gungano pemitsara.
3. Guruva isina workshop: 11.000 mativi Ft 2, 5 gungano mitsetse, anobvumawo vashandi 100.
4. jekiseni workshop: 32.000 mativi Ft 2, 20 jekiseni Kuumbwa michina, CNC / dzomoto muchina nezvimwewo muforoma kugadzira.
5. Advanced kugadzirwa midziyo: otomatiki chinamirwa muchina, mafuta kuzadza muchina, Laser achiita zvokutemera muchina, nechidzitiro wokudhinda.
Quality Our Control
1. Complete utariri hurongwa advertising pamusoro ISO9001.
2. Full rokuongorora zvokushandisa dzaFord: nemishonga tester, maikorofoni utetsa tester, kubvisa kuramba tester, USB kuchaja bvunzo. 100% muedzo dzaFord zvigadzirwa kuitira chigadzirwa zvinodiwa zvazvingava rinosvika 99.9%.
3. Perfect PAKAPERA cheni zvakanaka, yakazvimirira IQC utariri Unit, dzichengete mbishi zvinhu, uye zvakasimba kuita kuuya rokuongorora maererano AQL1.0 kutevedzerwa kuitira kuti kuuya zvinhu kusangana unhu zvinodiwa.
4. Periodic mbishi zvinhu RoHS yekuedzwa, uyewo dura cheni RoHS hunovimbisa chibvumirano kuitira kuti zvose kuuya zvinhu kusangana EU dzezvakatipoteredza mitemo.
5. Perfect unhu muitiro kuitira yepamusoro abnormality, kubva anokonzera wedzerai zvapedzisira Tracking.
6. E-mudzanga kusvuta zvigadzirwa vakapfuura EU CE / RoHS / TPD advertising, uye zvinogonawo zvidikanwi vatengi kuti kuita zvinodiwa advertising nerimwe nharaunda.
Disposable E-muto Hardware
E-Cigarette , Disposable CBD Hardware , E-muto Hardware , Original Vape Pen, Disposable E Cigarette , CBD Hardware ,